Pokemon Masters EX Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Salama Pokemon Masters, eto izahay miaraka amin'ny lalao Android farany ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Pokemon Masters EX Apk. Ity no lalao video Pokemon Android farany, izay manome tantara vaovao hisamborana pokemon sy hampiofana azy ireo. Azonao atao koa ny miady amin'ny tompo hafa amin'ny lalao 3vs3.
Araka ny fantatrao dia vokatra avy amin'ny orinasa japoney ny Pokemon. Izy io dia manome sehatra fialamboly isan-karazany ho an'ireo tia monsters pocket rehetra. Ny biby goavam-be am-paosy dia anarana hafa ho an'ny Pokemons. Noho izany, araka ny fantatrao dia misy andian-tantara an-tsarimihetsika, sarimihetsika ary lalao an-taonany maro.
Noho izany, fantaro amin'ity lalao farany ity, manome traikefa tsara indrindra ho an'ireo tia monsters paosy. Izy io dia manome zokiolona sasany, izay tsy maintsy hisambotra biby goavam-be isan-karazany sy hampiofana azy ireo. Misy fialamboly tsy misy fetra ho an'ny mpankafy pokemon paosy.
Izy io dia kilalao mifototra amin'ny tantara foronina, izay mahasarika olona an-tapitrisany maro samy hafa taona, avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Misy hetsika samihafa, amin'ity lalao ity, izay hozarainay amin'ny antsipiriany aminareo rehetra. Noho izany, mijanòna kely miaraka aminay ary fantaro miaraka aminay ity app ity.
Topimaso momba ny Pokemon Masters EX Apk
Izy io dia rindrambaiko filalaovana Android, izay novolavolain'i DeNA Co., Ltd. Manolotra tantara iray, ahafahanao mandray anjara sy mampiofana biby goavambe. Manome ny iray amin'ireo tantara tsara indrindra amin'ity andiany ity izy, miaraka amin'ny hetsika tsara indrindra. Ny zava-mitranga amin'ity dia miova hatrany miaraka amin'ireo fanavaozana ao amin'ity app ity.
Manolotra kilalao samihafa izy io, tsy maintsy mahazo marika famantarana dimy ianao amin'ny voalohany. Raha te hahazo marika ianao dia tsy maintsy mandresy ny mpitarika PM isan-karazany. Raha vantany vao azonao ireo badge ireo dia afaka mandray anjara amin'ilay tolona ianao. Fa tsy maintsy manamboatra ny ekipanao ianao. Tsy maintsy manatevin-daharana tompo roa hafa ianao.
Amin'ity andiany ity dia azo ampiofanina ireo biby goavam-be ary azo havaozina ho kintana enina ny hery. Ao amin'ireo kintana enina dia manome fanavaozana herinaratra ary afaka manokatra hoditra vaovao ihany koa ianao. Isaky ny manala ny pokemon hafa dia mampitombo ny haavonao. Izy io koa dia manome atody foy.
The Lalao 3D manome tarehintsoratra samy hafa, miaraka amin'ny fanaraha-maso saika mitovy. Tombontsoa iray hafa ho an'ny mpampiasa izany, ny mifehy azy. Izy io koa dia manome akanjo, izay azonao jerena amin'ny lalao tsara. Izy io koa dia manome hetsika sy vokatra manokana.
Manolotra biby goavam-be isan-karazany izy io, azonao zahana. Noho izany, sintomy ity lalao ity ary zahao ity tantara ity. Raha manana olana ianao amin'ny fisintomana ity rindranasa ity dia aza misalasala mifandray aminay. Hamaha ny olana haingana araka izay tratra izahay.
anarana Pokemon Masters EX
Anaran'ny fonosana com.dena.a
Developer DeNA Co, Ltd
Ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy zavatra hafa azonao jerena. Hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe ao amin'ny lisitra etsy ambany isika. Azonao atao ihany koa ny mizara ny traikefanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Mpandray anjara marobe
Misy ny hoditra sy akanjo
Haavo hatramin'ny 6
Hery fanampiny sy fihetsika
Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy azo antoka amin'ity rindranasa ity miaraka aminareo rehetra. Hita ao amin'ny Google Play Store ihany koa io. Hizara rohy azo antoka izahay, koa aza misalasala mametraka azy amin'ny fitaovanao. Tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny fanovana ary sokafy ny fiarovana, avy eo fanamarihana 'Source tsy fantatra'. Vantany vao vita io dingana io, afaka mandefa azy amin'ny fitaovana ianao.
Pokemon Masters EX Apk dia manome traikefa lalao tsara indrindra ho an'ny mpankafy Pokemon rehetra. Noho izany, sintomy ity lalao ity ary zahao ny tontolon'ny pokemon. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Games, Role Playing Tags Lalao 3D, Pokemon Masters EX, Pokemon Masters EX Apk, Pokemon Masters EX App Post Fikarohana
1 hevitra momba ny "Pokemon Masters EX Apk maimaim-poana ho an'ny Android"
May 28, 2022 amin'ny 7: 22 pm
Lalao mahafinaritra ho an'ny pokemon master ex 👏🏻 👏🏻 👏🏻 lavo ny volan'ny lalao osem